Sawirada Xayeysiinta: Nidaamka nashqadeynta talaabo talaabo | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta naqshadeynta waa in lagu xisaabtamo inay tahay aaladda ugu habboon uguna wax ku oolka badan ee shirkadaha iyo hay'aduhu u isticmaali karaan inay si hufan ugu xalliyaan ugana fuliyaan ujeeddooyinkooda suuq-geynta iyo isgaarsiinta. Waa muhiim in ugu horreyntii, waxaan xoogga saareynaa fikradda naqshadeeye. Heerkeedii ugu hooseeyay Maxaa sameeya naqshadeeye wanaagsan? Inay u shaqeyso sidii isku xira u dhexeeya adduunka hal-abuurka ah iyo baahiyaha macaamiisheeda. Abuur mashruuc ka kooban dhammaan maaddooyinka si aad u soo jiidatid dadweynaha oo aad shirkad u sameyso. Samee farriin shirkadeed oo ku saabsan dhiirrigelinta, luqadda cusub ee muuqaalka leh.
Waa inaanan khaladaad sameynin markay tahay dhexgalka fikradda naqshadeeye muuqaal ah. Naqshadeynta maahan qalab lagu qurxiyo, ka fog Waa gaari isgaarsiineed. Naqshad wanaagsan ayaa u rari doonta daawadayaasha meel kasta oo abuurahoodu go'aansado, laakiin waa inaan raadinno xirfad iyo hufnaan iyadoo la raacayo hab sax ah. Waxaan u baahanahay inaan ku shaqeyno cabirro kala duwan, laga bilaabo cilmi baarista, codeynta iyo wax soo saarka. Tan waxaa ka mid ah astaamaha shirkadda, mashruuca aan abuureyno (noocyadeeda muujinta iyo iibinta, haddii ay jiraan) iyo miisaaniyadda.
1 Naqshadeynta cilmi baarista
2 Nidaamka naqshadeynta iyo codeynta
3 Habka naqshadeynta wax soo saarka
Baaritaan habka naqshadeynta
Tallaabadan, naqshadeeye ayaa si qoto dheer ugu dhex muquuninaya macmiilka, ha noqoto shirkad ama shaqsi. Ujeeddadu waa in si buuxda loo fahmo istiraatiijiyadda iyo gaar ahaan dhaqanka shirkadaha ku xeeran ganacsiga. Ujeeddadu waa qayb aasaasi ah oo wajigan ah, qaab ahaan waxa aan isku dayeyno inaan ka soo saarno geeddi-socodkan baaritaanka waa qalfoofka iyo qaabdhismeedka taageeri doona shaqada oo dhan. Waxaan u baahanahay inaan raajo ka qaadno macaamiisheenna raadinaya heerka ugu sarreeya ee saxda howsheenna. Waxay noqon laheyd wax aad u xiiso badan in la ogaado qaabka uu u shaqeeyo macmiilkeenu, qaabkiisa u fekero iyo xitaa nolosha (sidoo kale heerka dhaqankiisa ama saameynta uu ku leeyahay hareerahiisa).
Talaabadan koowaad, falanqaynta waxay noqoneysaa waxa dhaqaajinaya qorshaheena. Waxaan ku jirnaa xilli maskaxeed iyo falanqeyn badan oo mashruuca ah. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan ka shaqeyno dhammaan macluumaadka la soo ururiyey, amro oo aan u kala dhigno si aan u helno astaamaha aasaasiga ah. Marka aan diyaarino warbixinteena oo aan si qoto dheer u falanqeyno nooca qofka u baahan adeegyadayada, waxaan awoodi doonnaa inaan soo jiidanno xariiq iyo qaab la jaan qaadaya muuqaalka shirkadaha iyo dhaqanka.
Codsiga iyo codeynta habka naqshadeynta
Waxaan horeyba u haysannay waxa ugu muhiimsan, kuwaas oo ah saldhigyada shaqeeya. Waan ognahay cidda aan u shaqeyneyno, waan ognahay waxaad raadineyso waana ognahay sida loo gaaro. Waxaan u baahanahay in aan baarno qolkayaga aqoonta oo aan soo saarno dhammaan walxaha ku shaqeeya fikradda aan go'aansannay in aan qaabeyno. Si uun, waxaan u dhihi karnaa waxa ku saabsan waa abuurista tarjumaad, waxaan nahay tarjumaano udhaxeeya laba adduun. Inkasta oo ay u muuqato wax la yaab leh runtii naqshadeeye garaaf ah waa dhexdhexaad, waa qofka u dhexeeya labada adduun waana inuu awood u yeeshaa inuu sameeyo xiriir ka dhexeeya labadaas adduun. Waan ognahay waxa macmiilkeenu doonayo waxaan kaloo ognahay noocyada fikradaha, aqoonta iyo mashaariicda isaga la socon kara. Waa inaan dhisno xiriir ka dhexeeya baahiyaha macaamiisheenna iyo adduunkeenna muuqaalka gaarka ah (kan aan mas'uul ka ahayn dhisidda aqoonteenna iyo dhaqankeenna muuqaalka ah).
Waxaa la joogaa waqtigii loo soo bandhigi lahaa fikradahaas nolosha, si loogu qeexo dhammaan fikradahaas iyo aqoontaas luqadda muuqaalka ugu habboon uguna wax ku oolka ah. Tan waxaan ula jeedaa in shaqada oo dhan la qabtay. Taas bedelkeeda, waxaa naloo soo bandhigi doonaa beddelaado kala duwan, waddooyin iyo fursado abuur. Maskaxda ku hay inaan nahay xog ururin ballaaran waana inaan ogaanno sida loo maareeyo qaababka muuqaalka, khibradeena shaqsiyadeed, farsamooyinka, shandadahayaga iyo kaydkayaga ilaha jira (waqtiga, macnaha, keydka ...)
Wax soo saarka habka naqshadeynta
Kadib tijaabinta, diyaarinta iyo baaritaanka arsenal ee hal abuurka, waxaan ku guuleysan doonnaa natiijada aad filayso. Haddii aan nahay dad dareen leh oo leh awood xallin weyn, waxaan awoodi doonnaa inaan helno qaaciddada saxda ah. Waxaan haynaa dhammaan walxaha si aan u gaarno himilada saxda ah, taas oo ah inaan metelno macmiilkeenna oo aan ku baraarujino jawaab qiiro leh oo ku saabsan dhagaystayaasheena matalaadan.
Waxaan si taxaddar leh u baarnay saameynta mashruuca, aqoonsiga macmiilka waxaanna dhignay qabyo-qoraallo ama sawirro si loo muujiyo loona muujiyo fikradeena iyadoo la adeegsanayo waaya-aragnimadeena iyo kheyraadkeenna, laakiin ka hor inta aan loo gudbin heerka ku xigga waa inaan qaadnaa tallaabo dhexdhexaad ah oo u dhexeysa wajigii hore waana: Muuji oo u soo bandhig fikraddeena qeexan kuwa masuulka ka ah shirkadda. Mar alla markii ay nasiiyaan Ok ama hor-u-socodka, waxaa la joogaa waqtigii loo aadin lahaa wejiga wax-soo-saarka laftiisa. Waxaan bilaabi doonnaa shaqada iyo dhismaha farshaxanka ugu dambeeya, mar dambe iyo markii howshu dhammaato, waxaan u diri doonnaa wajiga xaqiijinta, taas oo ah, in la daabaco (haddii loo baahdo).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sawirada Xayeysiinta: Nidaamka nashqadeynta talaabo talaabo ah
John Dal dijo
Ku dar qeybta wax soo saar tayo muuqaal tayo wanaagsan leh, macno ballaaran.
Jawaab Juan Dal
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga, Waanu tixgelinaynaa!